Akuselona leli kheli – Kusuka ekubeni u-Alice Street kwaba uJohannes Nkosi Street – The Ulwazi Programme
U-Alice Street waqanjwa ngegama likaGrand Duchess u-Alice Maud Mary waseHesse, indodakazi yesibili yeNdlovukazi uVictoria noPrince Albert. Wazalwa ngo-1843 eBuckingham Palace futhi wabhapathizwa nguMbhishobhi Omkhulu waseCanterbury. U-Alice wagcina eshade neNkosana uLouis waseHesse (iHesse kwakuyisifunda esiseMpumalanga yeJalimane) kepha hhayi ngaphambi kokuncelisa ubaba wakhe ngesikhathi somkhuhlane omncane we-typhoid owathatha impilo yakhe.
Grand Duchess Alice Maud Mary of Hesse
UJohannes Nkosi wayengomunye wabaholi bokuqala beqembu lamaKhomanisi laseNingizimu Afrika okwathi, ngaphansi kobuholi bakhe, bafaka uchungechunge lwemibhikisho bephikisana nohulumeni wabamhlophe bangaleso sikhathi. Izenzo zikaNkosi kanye nemibono yama-Africanist kwagxilisa ukuqonda kwezepolitiki kubantu base-Afrika kulo lonke elaseNingizimu Afrika. Ushone ngesihluku ku-Alice Street eneminyaka engu-25 ngenkathi ehola umkhankaso we-anti-dompas.